Home News RW Kheyre oo shir qarsoodi ah la yeeshay Erik Prince & Kirill...
RW Kheyre oo shir qarsoodi ah la yeeshay Erik Prince & Kirill Dmitriev
Asaasihii Blackwater iyo Madaxa RDIF Kirill Dmitriev oo shira qarsoodi ah la qaatay R/Wasaare Kheyre.
Warar la isku halleyn karo ayaa MO u xaqiijiyey in R/Wasaare kheyre uu shir qarsoodi ah la galay Kirill Dmitriev iyo Sarkaal horay uga tirsanaan jiray Ciidanka Mareykan ee Navy SEAL isla markaana ah madaxii Blackwater Eric Prince. Eric waxaa kale oo uu wax ka asaasay shirkadda la yiraahdo Frontier Service Group (FSG), taas oo sannadkii tagay la gashay Maamulka K/Galbeed heshiis lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo Saadka. Heshiiskaas waxaa lagu qadaray inay ku kaceyso lacag aad u badan, waxana cidda maalgelineysa mashruucaan imaaraadka Carabta oo kaliya.
Shirkaas Qaarsoodiga ah R/Wasaare Kheyre waxaa uu ahaa mid uu kalsooni ku siinayey shirkadda FSG inay dawladda federaalka aysa ka hor iaman doonin isla markaana ay la shaqeyn doonto, sida uu ka codsaday shariif Xasan oo ay imaaraadka isku soo dhaweeyeen.
Shariif Xasan oo raba in loo dhiso Dekadda Baraawe si ay uga tashado Xamar iyo wax aka yimaada,isla markaana uga qeyb qaadato ganacsiga gobolka iyo Nabadgelyadaba, ayaa ah odayga ka shaqeyn doona in kheyre uu ka badbaado haddii duufaan Barlamanka uga timaado inta uu meel iska dhigayo xubintii shariif Xasan.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa noo xaqiijiyey in Eric Prince uu olole ugu jiro in dawladda Federaalka ay aqbasho inay isticmaasho calooshood u shaqeystyaal K/Afrikaan iyo Laatiin Amerikaan ah lagana maarmo AMISOM si tartiib tartiib ah.
Waxaa la leeyahay in R/Wasaare Kheyre, Eric Prince and Kirill Dmitriev oo ah madaxa shirkada ay maamusho dawladda Raashiya lana yiraahdo Russian Direct Investment Fund (RDIF) ay si hoose uga wada hadlay abuurista shirkad ilaalisa danaha SOMA-OIL and GAS. Shirkaddaas oo loo adeegsan karo wixii kale ee la doono ee hawllo ah. Shirkadaha noocan ah waxaa horay loo soo jeediyey in laga sameeyo dalka Afganistaan, ololahaas oo uu ka dhex waday Kongareska Mareykanka Eric Prince oo ay walaalo yihiin wasiirka waxbarshada ee Madaxweyne Trump.
Dhaxal sugaha Imaaraadka HH Mxamaed Bin Zayid ayaa la soo sheegay inuu ku adkeysan doono in la fogeeyo wadaadada usoo gagabanaya siyaasadda Somaliya, isla markaana la eryo Agaasimaha Madaxtooyada oo xiir weyn oo dhow la leh kooxda Ictisaam Fahad Yasin Xaji Dahir, si loo caadiyeeyo xiriirka Villa Somaliya iyo Imaaraadka, kadibna la siiyo $200 Milyan oo mashaariic horumarineed ah dalka Somaliya.
Imaardaaka waxay xiriir qoto dheer la lahaayeen Eric Prince iyo Shirkadiisa Academi (loona yaqaan Blackwater), xataa wararka qaar ayaa sheegaya inuu Imaaraadku rabo inuu isticmaalo calooshood u shaqeystayaal ay Blackwater leedahay si uu gacanta ugu dhigo gobolka oo dhan, Somaliyana ay tahay halkii laga bilaabi lahaa.